NLD သမ္မတလောင်းနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာရေးအစီအစဉ် ဦးဝင်းထိန်နဲ့ မေးမြန်းချက် NLD U Win Htein’s unprofessional pressinterview | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Dr Ko Ko Gyi’s Blog
Autobiography of Dr Abdul Rahman Zafrudin
« U Ko Ni’s speech in KL
လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်စေရန် လှုံ့ဆော်သည့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ »
NLD သမ္မတလောင်းနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာရေးအစီအစဉ် ဦးဝင်းထိန်နဲ့ မေးမြန်းချက် NLD U Win Htein’s unprofessional pressinterview
Than H Aung via RFA Burmese
ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းမှာ လွှတ်တော်သစ် စတင်ခေါ်ယူနိုင်ဖွယ်ရှိတာကြောင့် NLD ပါတီက တင်သွင်းမယ့် သမ္မတလောင်းနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်စာရင်းတွေ အများပြည်သူသိအောင် ထုတ်ပြန်ကြေညာသင့်ပြီလို့ နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတချို့က ထောက်ပြနေကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ NLD ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းထိန်ကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
This entry was posted on January 6, 2016 at 2:37 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.